Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Hawaii no fanjakana amerikanina sahiran-tsaina indrindra hipetrahana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Hawaii no fanjakana amerikanina sahiran-tsaina indrindra hipetrahana.
Ny vidin'ny trano antonony any Hawaii dia $1,293,301, fahatelo avo indrindra any Etazonia, ary manana ny vidin'ny fanofana ambony indrindra any Amerika, amin'ny $1,327 isam-bolana. Vokatr'izany, ny fanjakana dia manana isa faha-49 ratsy indrindra amin'ny adin-tsaina mifandraika amin'ny vola, izay miaraka amin'ny isa faha-48 ratsy indrindra ho an'ny anton-javatra ara-tontolo iainana toy ny faharatsian'ny lalambe sy ny maha fanjakana faharoa mafy indrindra, dia nahatonga an'i Hawaii ho fanjakana sahiran-tsaina indrindra any Etazonia.
Hawaii dia voasokajy ho fanjakana sahiran-tsaina indrindra any Etazonia, tonga ho iray amin'ireo fanjakana ratsy indrindra amin'ny vola sy ny adin-tsaina mifandraika amin'ny tontolo iainana.
Florida dia voasokajy ho fanjakana faharoa mahasosotra indrindra any Etazonia, mampiseho filaharana somary ratsy ho an'ny vola, asa, fahasalamana ary adin-tsaina mifandraika amin'ny tontolo iainana.
Vermont no fanjakana faran'izay mampahatahotra indrindra, laharana faharoa amin'ny toetry ny adin-tsaina indrindra ho an'ny sokajy mifandraika amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana.
Hawaii dia voasokajy ho fanjakana sahiran-tsaina indrindra any Etazonia.
Nanao fikarohana ireo manam-pahaizana momba ny torimaso mba hahitana ny toetry ny adin-tsaina indrindra any Etazonia, mifototra amin'ny famakafakana ireo antony adin-tsaina 22 samihafa mifandraika amin'ny asa, ny vola, ny fahasalamana ary ny tontolo iainana. Hitan'ny fandinihana fa i Hawaii no fanjakana mampahory indrindra, ary i Vermont no kely indrindra.
Nahazo naoty avy amin'ny 10 isaky ny lafin-javatra tsirairay ireo fanjakana, anisan'izany ny vidin'ny trano sy ny hofan-trano, ny fidiram-bola, ny tahan'ny fahaketrahana, ny asa ara-batana, ny haavon'ny torimaso, ny fidirana amin'ny toerana malalaka, ary ny haavon'ny tabataba.
Hawaii laharana voalohany amin'ny lisitra rehefa nahazo isa ambony indrindra noho ny vola sy ny adin-tsaina ara-tontolo iainana. Ny vidin'ny trano antonony ao amin'ny fanjakana dia $1,293,301, fahatelo avo indrindra any Etazonia, ary izy koa no manana ny vidin'ny fanofana ambony indrindra any Amerika, amin'ny $1,327 isam-bolana. Vokatr'izany dia manana ny 49 ny fanjakanath ny isa ratsy indrindra amin'ny adin-tsaina mifandraika amin'ny vola, izay miaraka amin'ny 48th naoty ratsy indrindra ho an'ny anton-javatra ara-tontolo iainana toy ny faharatsian'ny lalambe sy ny maha-firenena faharoa mafy indrindra, nitarika ny Hawaii ho fanjakana sahiran-tsaina indrindra any Etazonia.
Florida no fanjakana faharoa mahasosotra indrindra, ambany laharana noho ny anton-javatra toy ny tahan'ny tsy fananan'asa, ka ny 6.5%-n'ny mponina no misoratra anarana ho tsy an'asa. Ny fidiram-bolan'ny fanjakana somary ambany noho ny fanitsiana, ambany ny isan'ny tobim-pahasalamana ara-tsaina isan'olona, ​​ny valan-javaboary sy ny toerana malalaka isaky ny kilaometatra toradroa, ary ny haavon'ny tabataba niteraka Floridaambany laharana.
Any amin'ny faran'ny ambaratonga hafa, ny fianarana dia naoty Vermont ho fanjakana faran'izay mampahory indrindra. Vermont dia nitatitra ny ambany indrindra amin'ny fahantrana voarakitra an-tsoratra isan'olona, ​​izay mampihena be ny adin-tsaina mifandraika amin'ny volan'ny fanjakana. Ny fanjakana ihany koa dia manana ny tahan'ny faharoa tsara indrindra amin'ny tobim-pitsaboana ara-pahasalamana isan-olona, ​​ary iray amin'ireo fanjakana ambony indrindra ho an'ny hetsika ara-batana sy torimaso ampy, izay mitarika ho amin'ny laharana faharoa amin'ny sokajy ara-pahasalamana mifandraika amin'ny adin-tsaina.
Tim Slear hoy:
Oktobra 25, 2021 ao amin'ny 19: 32